British Broadcasting Corporation - BBC သတငှးဌာနမှ ထုတလှှှင့ခှဲ့သည့ှ နိုငငှံတောှ၏အတိုငပှငခှံပုဂဂှိုလှ အား BBC သတငှးဌာနမှ သတငှးထောကှ Fergal Keane က တှေ့ဆုံမေးမှနှး မှု (အငှဂှလိပဘှာသာ) အား မှနမှာဘာသာသို့ပှနဆှိုခကှနှှင့ှ အတူဖောပှှအပပှါသညှ။
Q: ပှောငှးလဲမှုကိုပှောရမယဆှိုရငှ သာမနပှှညသှူတှရေဲ့ဘဝမှာပေါ့ ၊ တောငအှာဖရိကမှ တှေ့ကှုံခဲ့ရတဲ့ အခှအနမှေေိုးပေါ့၊ လှတမှှောကရှေးလှုပရှှားမှုတဈရပအှပှီး အာဏာရ လာတဲ့အခှိနမှှာ စိတတှိုငှးမကဖှှဈတဲ့ အနအထေားမှိုးတှရှေိနတယလှေို့ ခံစားမိပါသလား? ပှညသှူတှရေဲ့ဘဝတှပေိုမိုကောငှးမှနဖှို့ ဘာတှမှေားလုပပှေးပှီးပါပှီလဲ?
A: လကတှှေ့ကကှပှှောမယဆှိုရငှ လမှးတှအမှေားကှီးဖောကခှဲ့တယှ။ ရှငတှို့အနနေဲ့ ဒီလိုလုပှ တာဟာဘာမှ ကှီးကှီးမားမားမဟုတဘှူးလို့ ထငကှောငှးထငမှယှ။ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ ရှငတှို့ဆီမှာ လမှးတှဟောဘိုးဘှားတှလကထှကကှတညှေးက ဖောကလှုပပှှီးနပှေီလေ၊ ကှှနမှတို့ဆီမှာတော့ အဓိပပှါယအှမှားကှီးရှိပါတယှ။ ရာသီမရှေးသှားလာနိုငတှဲ့ လမှးတှဟော လူတှအတှကှေ အမှားကှီးပှောငှးလဲစတေဲ့ အကှိုးကှေးဇူးတှရှေိပါတယှ။ မနှဈကဆိုရငှ ကှှနမှတို့ရဲ့ ဦးစားပေးလုပငှနှးတှထေဲ မှာ အလုပအှကိုငဖှနတှီးရေးကို ဦးစားပေးတဈရပအှနနေဲ့ ထားခဲ့တယှ။ တဈနှဈအတှငှးမှာ သတိပှုမိတာက ရာသီမရှေးသှားနိုငတှဲ့ လမှးတှဖေောကှ လုပနှိုငရှငှ ၊ လှှပစှဈဓာတအှား တှပေိုမိုဖှန့ဖှှူးနိုငရှငှ ပှညသှူတှအနနေေဲ့ သူတို့ကိုယတှိုငကှ စတငပှှီး လုပငှနှးတှလေုပကှိုငလှာနိုငကှှမှာ ဖှဈပါတယှ၊ ဒီလိုဖှဈလာတာဟာ ကှီးမားတဲ့ ပှောငှးလဲမှုတှကေို ဖှဈစပေါတယှ။
A: ဒါပမယှေ့ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ ကောငှးမှနအှောငလှုပနှိုငခှဲ့တဲ့လုပငှနှးတဈခုကတော့ ငှိမှးခမှှးရေး လုပငှနှးစဉကှို ရှေ့ဆကနှိုငအှောငဆှောငရှှကနှိုငခှဲ့တာဟာလညှး ပိုပှီး သိသာတဲ့ ဆောငရှှကခှကှှ လို့ထငပှါတယှ။ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ လိုရာ ရောကပှှီလို့တော့မပှောနိုငသှေးပါဘူး၊ ဒါပမယှေ့ အောငမှှငမှှုတဈရပပှါ၊ အထူးသဖှင့ှ ပှညသှူတှပေိုမိုပါဝငလှာတာဖှဈပါတယှ။
Q: အဈမကှီးအနနေဲ့ ငှိမှးခမှှးရေးဖှဈစဉဟှာ ပှီးခဲ့တဲ့ တဈနှဈတာအတှငှးရရှိခဲ့တဲ့ အောငမှှငမှှု တဈရပလှို့ပှောခဲ့ပါတယှ၊ ဒါပမယေ့အှခှို့ နယစှပဒှသတှမှေော တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငှ မှားနဲ့ တိုကပှှဲတှပှငှေးပှငှးထနထှနဖှှဈနတောကို တှေ့နရပေါတယှ?
A: ကှှနမှတို့ ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ လုပကှှတယဆှိုတာ တိုကခှိုကမှှုတှရှေိနလေိုပေါ့။ တိုကခှိုကှ မှုတှသော မရှိရငှ ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ လုပဆှောငစှရာလညှး လိုဦးမှာလား၊ တိုကခှိုကမှှုအားလုံး အဆုံးသတပှှီး အားလုံးအခှတကဖှေှဈနပှေီဆိုရငှ ငှိမှးခမှှးရေးလုပငှနှးစဉဆှိုတာလဲ ပှီးဆုံး သှားပှီလို့ ဆိုရမှာပေါ့၊ ဒါ့ကှောင့ှ အစကတညှးက ကှှနမှတို့အနနေဲ့ လိုရာတော့မရောကသှေးဘူး လို့ပှောခဲ့တာပေါ့။
Q: အဈမကှီးအနနေဲ့ တပမှတောှ အပေါမှှာလညှး ထိနှးခှုပနှိုငမှှုမရှိဘူး၊ လုံခှုံရေးတပဖှှဲ့တှကေိုလညှး မထိနှးခှုပနှိုငဘှူး၊ တိုကပှှဲတှဖှဈတေဲ့ အခါမှာ သူတို့တှအနနေေဲ့ လုယကမှှု၊ မုဒိမှးမှု နဲ့ နှိပစှကညှှငှးပနှးမှုတှကေို သူတို့ လုပနှကအှတေိုငှး လုပနှတောကိုရော?
A: သူတို့တှအနနေေဲ့ လုယကမှှု၊ မုဒိမှးမှု နဲ့ နှိပစှကညှှငှးပနှးမှုတှကေို လုပခှှင့ှ မရှိပါဘူး၊ မလုပပှါဘူး၊ သူတို့တှအနနေေဲ့ တိုကပှှဲတှကေိုတော့ တိုကခှိုကနှိုငပှါတယှ၊ ဖှဲ့စညှးပုံအခှခေံဥပဒမှော စဈရေးစဈရာကိဈစတှကေို တပမှ‌တောကှသာ စီမံခန့ခှှဲပိုငခှှင့ှ ပှဌာနှးထားတယလှေ၊ ဒါ့ကှောင့လှဲ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ အခှခေံဥပဒကေို ပှောငှးဖို့ကှိုးစားနတောပေါ့ ၊ အခှခေံဥပဒကေို ပှငဆှငနှိုငှ ဖို့ဆိုတာ ကှှနမှတို့ရဲ့ ရညမှှနှးခကှတှှထေဲက တဈခုပေါ့၊ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ NCA ရဲ့နောကဆှုံး ပနှးတိုငကှ ဖယဒှရယစှနဈအခှခေံတဲ့ ဖှဲ့စညှးပုံအ‌ခှခေံဥပဒကေို ပှဌာနှးနိုငဖှို့လေ၊
Q: မှနမှာ့ သမိုငှးလမှးကှောငှးကို ပှနကှှည့မှယဆှိုရငှ လှတလှပရှေးရပှီးကတညှးက ဘာတှဖှဈနတေောပါလဲ?
A: ရှင့အှနနေဲ့ တောငအှာဖရိကမှာ နဖေူးကှုံဖူးခဲ့တာပဲ၊ အသားအရောငခှှဲခှားမှုမူဝါဒကို အဆုံး သတနှိုငခှဲ့တယှ။ ရှငအှနနေဲ့တော့ မဟုတဘှူးပေါ့။ တောငအှာဖရိက ပှညသှူပှညသှား တှအေားလုံး ဝိုငှးဝနှး လုပဆှောငနှိုငခှဲ့တာပဲ၊
Q: ဘယအှခှိနအှတိုငှးအတာကို ပှောနတောလဲ? လပိုငှးအတှငှးလား နှဈပိုငှးအတှငှးလားခငဗှှား?
A: နှဈအနညှးငယထှကတှော့ ပိုမကှာသင့ဘှူးလို့ မှှောလှင့ထှားပါတယှ၊ အဲဒီလိုဖှဈအောငလှညှး ရညမှှနှးဆောငရှှကနှပေါတယှ။
Q: နောကတှဈခုမေးခငှတှာကတော့၊ အဈမကှီးလညှး သိပှီးသားပါ။ ယခု နိုငငှံတကာ မှာ စိုးရိမပှူပနမှှုတှဖှဈပေေါနှပှေီး ၊ အဈမကှီးအပေါှ နိုငငှံတကာ အသိုကအှဝနှးရဲ့ အမှငပှါ။ သတငှးစာ ခေါငှးကှီးပိုငှးတှကေိုလညှး အဈမကှီးတှေ့ပှီးဖှဈမှာပါ။ အဈမကှီးအနနေဲ့ ရိုဟငဂှှာမူဆလငတှှကေိဈစ ကိုငတှှယဖှှရှငှေးမှုနဲ့ ပတသှကပှှီး နိုငငှံတကာမှာ ထငပှေါှ ကှောဇှောသူတှကေ ဝဖနရှှေုတခှပှှောဆိုနတေဲ့ ကိဈစပါ ၊
A: သူတို့က ဘာကို ရှုတခှနှတောဘဲ?
Q: ရခိုငပှှညနှယအှတှငှးကို ကုလသမဂဂှရဲ့ အခကှအှလကရှှာဖှရေေးအဖှဲ့ တဈဖှဲ့ စလှေှတတှာကို အဈမကှီးကို လကခှံစခငှတှေဲ့ကိဈစပါ?
A: ဒါပမယှေ့ အဲ့ဒါက အခုမှဖှဈတာလေ၊ ပှီးခဲ့တဲ့လကမှ သူတို့တောငှးဆိုတာလေ၊ ပှီးခဲ့တဲ့ တဈနှဈလုံး ဘာတှကေို ရှုတခှနှတောလဲ?
Q: လူတှအမှေားကှီးကပေါ့၊ အဈမကှီးအပေါစှာနာစိတရှှိတဲ့လူတှအပေါအဝငပှေါ့၊ လူ့အခှင့အှရေး အထငကှရပုဂဂှိုလတှဈဦးအနနေဲ့ ဘာကှောင့ဒှီကိဈစကို တဈစုံတဈရာမပှောတာလဲ ဆိုပှီးတော့ပေါ့နောှ?
A: တဈစုံတဈရာ ပှောဆိုမှုမပှုဘူးဆိုတာ ဘာကိုပှောတာလဲ? ဒီမေးခှနှးမှိုး ယခငှ ၂၀၁၃ ခုနှဈ ရခိုငအှရေးကိဈစ ဖှဈစဉကှလညှး မေးခဲ့ကှတယလှေ။ အဲ့ဒီတုနှးကလညှး သူတို့တှေ့ မေးခဲ့သမှှ ကှှနမှပှနဖှှခေဲ့တယှ။ ဒါမမယှေ့ ကှှနမှဘာမှ မပှောဘဲနတယလှေို့ပဲပှောကှပှနရှော။ အဲဒါက ရှငှးပါတယှ၊ ကှှနမှက သူတို့ကှားခငှတှဲ့ စကားမှိုးမပှောလို့လေ၊ သူတို့ကှားခငှတှာက အသိုကအှဝနှး နှဈခုထဲက တဈခုကို ရှေးခယှပှှီး ပှဈတငဝှဖနတှောကို ကှားခငှတှာပါ။
Q: နိုဘယဆှုရှငတှှရေဲ့ ပှောခဲ့တဲ့စကားအခှို့ကို ကိုးကားပှောခငှပှါတယှ။ “ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညအှား အကှိမကှှိမအှခါခါ အသနားခံပှောကှားခဲ့သောလှညှး ရိုဟငဂှှာမှားရဲ့ တနှးတူရညတှူရှိမှု နှင့ှ နိုငငှံသားအခှင့အှရေး အပှညအှဝ ရရှိခံစားနိုငရှေးအတှကှ အရေးယူဆောငရှှကပှေးခှငှးမရှိသည့အှတှကှ စိတပှကှရှကှောငှး” ၊ ပှီးတော့ “ဒေါစှုကှညဟှာ ခေါငှးဆောငတှဈယောကအှနနေဲ့ သတတှိရှိရှိ၊ လူသားဆနဆှနှ နှင့ှ သနားကှငနှာမှုနဲ့ အဓိကဦးဆောငရှမည့ှ တာဝနရှှိကှောငှး၊” အခှုပအှားဖှင့ှ အဈမကှီးအနနေဲ့ လူသားဆနတှဲ့စိတဓှာတရှှိ/မရှိဆိုတဲ့ စမှးသပခှကှဖှှဈပှီး အဈမကှီးအနနေဲ့ ကရှှုံးတယလှို့ သူတို့ရှုမှငကှှောငှး၊?
A: ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့အမှငဖှှဈပါတယှ။ အမှနတှရားကတော့ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ နိုငငှံတာဝနှ စယူတဲ့အခှိနမှှာ ပထမဦးဆုံးဆောငရှှကခှဲ့တဲ့ကိဈစက နိုငငှံသားစိစဈရေးလုပငှနှးစဉဆှိုတာကို သူတို့ထည့သှှငှးစဉှးစားမိပါသလာ?။ နိုငငှံသားဖှဈထိုကသှူတှေ နိုငငှံသားဖှဈလာစဖေို့ ဆောငရှှကခှဲ့တာပါ။ ကှှနမှတို့ နိုငငှံသားစိစဈရေးလုပငှနှးစဉနှဲ့အတူ ဒသဖှေံ့ဖှိုးရေးလုပငှနှးမှားကိုပါ စတငလှုပဆှောငခှဲ့ပှီး ဒသအတှငှေးတညငှှိမအှေးခမှှးဖို့နဲ့ သဟဇာတမှှတရေးကို ဖေါဆှောငပှေးနတောပါ။
ရခိုငပှှညနှယအှတှငှးမှာ ရှိတဲ့ပှူနာအတောမှှားမှားဟာ အရငှးအမှဈရှားပါးမှု နဲ့ အသိုကှ အဝနှးနှဈခုဟာ သူတို့ရဲ့ရှေ့ရေးကို စိုးရိမကှှောင့ကှှမှုတှရှေိနပေါတယှ။
A: အောကတှိုဘာလမှာ နယခှှားစောင့ရှဲစခနှးတှကေို တိုကခှိုကမှှုတှပှေုလုပခှဲ့တာနဲ့ ပတသှကပှှီး ဘာကှောင့ဖှှဈလာတယဆှိုတာကို ဘယလှိုမှစဉှးစားလို့မရဘူး၊ အဲဒီအခှိနမှှာ နိုငငှံသားစိစဈရေး ကိဈစတှေ၊ IDP စခနှးကလူတှကေို ပှနလှညနှရောခထှားဖို့ကိဈစတှေ စတငဆှောငရှှကနှတေဲ့ အခှိနပှါ။ ခှောခှောခှူခှူ ဆောငရှှကနှတေဲ့ ကိဈစတှအေားလုံး အခု တိုကခှိုကမှှုတှကှေောင့ှ ကမောကကှမဖှဈကုနတှယှ။ ဘာအကှောငှးကှောင့ှ ဒီလိုဖှဈစရာရှိလဲဆိုတာကို နားမလညှ နိုငဘှူး။ ဒါပမယှေ့ လူအတောမှှားမှားက အဲဒီလို အခှအနေေ (ဒီလိုဖှဈလာအောငဖှနတှီးနတေဲ့ အ‌ခှအနေေ) တှကေိုမသိကှိုးကှှံမကှကှှယပှှုနကှသလေိုပါပဲ ။ ဘာ့ကှောင့မှကှကှှယပှှု နတောလဲ?
Q: ကှှနတှောှ ရဝမဒှါ၊ ဘောလှကှနဒှသမှေားမှာ အကှိမကှှိမှ ကိုယတှိုငကှိုယကှသှှားရောကှ၍ တှေ့မှငခှဲ့ခှငှး၊ လူအမှားအားမေးမှနှးမှုပှုလုပခှှငှးစသည့အှတှေ့အကှုံမှားမှ လူမှိုးရေး မုနှးတီးမှု နဲ့ လူမှိုးစုမှိုးသုနှးသတဖှှတမှှု ကှာခှားခကှကှို ကောငှးကောငှးနားလညထှားပါကှောငှး၊ ရခိုငဒှသမှော စိတမှကှမနပမှေှုတှေ တိုးတကမှှားပှားလာတဲ့အတှကကှှောင့ှ အစှနှးရောကှ စဈသှေးကှှတှရေဲ့ လကထှဲရောကသှှားပှီး ယခုလို တိုကခှိုကမှှုတှဖှဈပှေားခှငှးဖှဈတယလှို့မှား ထငပှါသလား?
A: ကှှနမှတို့ခှိနဆှနိုငတှာကတော့၊ အဲဒီအခှိနမှှာ အားလုံးအေးအေးခမှှးခမှှးရှိနတယှေ။ ဘာဖှဈလို့ လဲဆိုတော့ လူတှကေ ကှှနမှတို့ရဲ့ ဖှံ့ဖှိုးရေးလုပငှနှးစဉတှှေ၊ နိုငငှံသားစိစဈရေး လုပငှနှးစဉှ တှရေဲ့ ရလဒတှှကေို စောင့ကှှည့နှလေို့ပါ။ အဲဒီလုပငှနှးတှကေို ရပဆှိုငှးသှားအောငှ သခှောတှကခှကှပှှီး ဆောငရှှကတှာလားလို့ ထငရှပါတယှ။
Q: ဒါတှကေိုရှငှးလငှးသှားဖို့အတှကှ နိုငငှံတကာ အခ ကှအှလကရှှာဖှရေေးအဖှဲ့ နဲ့ နိုငငှံတကာ အဂငှစှေီတှကေို လာခှင့ပှှုလိုကရှငှ မကောငှးဘူးလား၊ လာခှင့ကှောပှုမှာလား?
A: ဘာကိဈစမှ မဖှဈခငကှတညှးက ရခိုငအှရေးကိဈစမှားလေ့လာသုံးသပပှေးဖို့ မဈစတာကိုဖီအာနနရှဲ့ ကောမှရှငကှို ဖိတကှှားခဲ့တယလှေ။
A: ဒီလိုလုပခှဲ့တာ ကုလသမဂဂှကတောငှးဆိုလို့လညှးမဟုတဘှူး။ ဘယအှဖှဲ့အစညှးကမှ ကှှနမှတို့မှာ အခကှလှကရှှာဖှရေေးမဈရှငှ လိုအပတှယလှို့ မပှောခငှ ကတညှးက၊ ဒေါကတှာကိုဖီအာနနကှို ဖိတခှေါခှဲ့ပှီး ကောမှရှငကှိုဖှဲ့စညှးတယှ။ ရခိုငကှိဈစကို ရရှညဖှှရှငှေေးနိုငမှယ့ှ နညှးလမှးတှရှောဖှပေေးပို့အကူအညီတောငှးခဲ့တယှ။ ကောမှရှငကှပေးထားတဲ့အကှံံပှုခကှတှှကေို ကှှနမှတို့ ဘယလှိုအကောငအှထညဖှောဆှောငရှှကနှတေဲ့အခှအနတှေေေ ဘယလှိုရှိနလေဲဆိုတာကို သူ့ကို တဈခေါကှ ပှနလှာပှီး ကှည့စှခငှပှေါတယှ။
Q: ဘငှဂှလားဒေ့ရှှနိုငငှံဘကကှို ထှကပှှေးသှားတဲ့ သူတှကေို ပှနလှာဖို့ခေါမှှာလား၊ ပှနလှာရငှ လုံခှုံစိတခှရှပါတယလှို့ ပှောမှာလား?
A: သူတို့ပှနလှာရငှ လုံခှုံမှာပါ၊ ပှနလှာတာ မလာတာ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖှတခှကှပှါ၊ တဈခှို့ပှနလှာ ကှပါတယှ၊ ထှကသှှားတဲ့သူတှကေို ဘာကှောင့ှ ထှကသှှားတယဆှိုတာမေးတော့ သူတို့နတေဲ့ နရောဒသတှမှေော တိုကခှိုကမှှုတှဖှဈလေို့ ထှကပှှေးတာလို့ပှောတယှ၊ တိုကခှိုကမှှုတှဖှဈနေေဦးမယှ ဆိုရငတှော့ သူတို့ ပှနလှာခငှမှှာ မဟုတဘှူးပေါ့။
Q: သူတို့ကို လကခှံ မှာလား?
A: လကခှံမှာပါ၊ ပှနလှာနကှတောပဲ၊ ပှနလှာတဲ့သူတှကေိုလညှး လကခှံနတောပဲ၊
Q: အဈမကှီးကို လူတှကေ မိမိတိုငှးပှညမှှာ လူမှိုးသုဉှးသုတသှငရှှငှးလငှးမှုဖှဈပေါနှတောကို တားဆီးဖို့ ပကှကှှကခှဲ့တဲ့ နိုဘယဆှုရှငတှဈယောကအှဖှဈသောလှညှးကောငှး၊ လူ့အခှင့အှရေး အတှကှ အထငကှရ ရပတှညသှူ ပုဂဂှိုလတှဈယောကအှဖှဈလညှးကောငှး မညသှို့ အမှတတှရ ကနှရှဈခဲ့မညကှို စိုးရိမမှှုမှား ထားရှိပါသလား?
A: မဖှဈပါဘူး ။ ဘာ့ကှောင့လှဲဆိုတော့ အခုဟာက လူမှိုးသုဉှးသုတသှငရှှငှးလငှးမှုဖှဈနတောမှ မဟုတတှာ၊ လူမှိုးသုဉှးသုတသှငရှှငှးလငှးမှုဆိုတာ အခုဖှဈနတေဲ့အခှအနကေေိုပှောဖို့အတှကှ မကိုကညှီပါဘူး။ ပှငှးထနလှှနှးပါတယှ။
Q: ကှှနတှောမှှငခှဲ့တော့ ကှှနတှောပှှောရမှာပဲ။
A: ကှှနမှ ထောကပှှခဲ့သလိုပဲ အဲဒီမှာ အာဃာတအမုနှးတရားကှီးမားကှပါတယှ။ ယုံကှညသှူတှကပေဲ အာဏာပိုငတှှနေဲ့ ပူးပေါငှးသူတှလေို့ထငတှဲ့ မူဆလငှ တှကေို မူဆလငတှှကပေဲ သတဖှှတှ နကှတောလေ။ ဒါကို လူမှိုးသုဉှးရှငှးလငှးသုတသှငမှှုလို့ပှောလို့မရဘူးလေ၊ အဲဒါက တဈဖကနှဲ့ တဈဖကကှှာခှားနတေဲ့ အသိုကအှဝနှးကှားမှာ ရှိနတေဲ့ လူတှအကှေားဖှဈပေါနှတေဲ့ ပဋိပကခှ ကိဈစပါ၊ အဲဒီကှာခှားနမှေုတှကေို ကှှနမှတို့က ကှိုးစားပှီး နီးစပအှောငှ လုပပှေးနတောပါ။ အတတနှိုငဆှုံး ဒီထကပှိုပှီး ကှာခှားမသှားဖို့ ကှိုးပမှးဆောငရှှကပှေးနတောပါ၊
Q: အနောကနှိုငငှံက လူတှအနနေေဲ့ အဈမကှီးအပေါှ အထငအှမှငှ နားလညမှှုလှဲမှားနတယှေ။ အဈမကှီးရဲ့ စရိုကလှကခှဏာအပေါှ သုံးသပမှှု လှဲမှားနတယလှေို့ ထငမှှငပှါသလား? အဈမကှီး ကို သူတို့အနနေဲ့ မဟတတှမဂနဒှီ နဲ့ မာသာထရီဆာတို့ကဲ့သို့ မှငခှငှနှပေုံပေါတှယလှို့ ထငပှါသလား? ဒါမှမဟုတှ မာဂရကသှကခှှာလို ဆုံးဖှတခှကှပှှတသှားပှီး သံမဏိကဲ့သို့ မာကှောသူလို့မှား မှငနှမလေားလို့?
A: မထငပှါဘူး။ ကှှနမှက နိုငငှံရေးသမားတဈယောကပှါ၊ မာဂရကသှကခှှာနဲ့လညှးမတူပါဘူး၊ တဈဘကမှှာလညှး မာသာထရီဆာလညှး မဟုတပှါဘူး၊ သူတို့နဲ့တူအောငလှညှး တဈခါမှ မပှောခဲ့ပါဘူး၊ မဟတတှမဂနဒှီကတော့ အငမှတနမှှ ပါးရညနှပရှညရှှိတဲ့ နိုငငှံရေးသမား တဈယောကပှါ၊
Q: မဟတတှမဂနဒှီအနနေဲ့ သူ့ရဲ့အသကအှနတှရာယကှို မငဲ့ဘဲ လူနညှးစု မူဆလငတှှအတှကှေ ကာကှယဖှို့လုပခှဲ့တာပေါ့နောှ၊ အဲဒီလိုမှိုး နမူနာယူစရာလို့ မထငဘှူးလား?
A: မိမိအသကကှို စှန့စှားပှီး လုပငှနှးဆောငရှှကခှဲ့တယဆှိုတဲ့ စံနမူနာထကှ သူရဲ့ မှနမှှတတှဲ့နိယာမ သဘောတရားတှကေို လေးစားလိုကနှာ နထေိုငသှှားတာက ပိုအရေးပါပါတယှ။
Q: နောကဆှုံးမေးခှနှးပါ၊ ဘာ့ကှောင့ှ ရခိုငပှှညနှယကှို ကိုယတှိုငသှှားပှီး အသိုကအှဝနှး နှဈခုလုံးနဲ့တှေ့ပှီး ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ တိုကတှှနှးတာမှိုးမလုပတှာလဲ?
A: ဘာ့ကှောင့လှဲဆိုတော့ ရခိုငကှိဈစနဲ့ ပတသှကပှှီး ဆောငရှှကနှတေဲ့သူတှေ သူတို့လုပငှနှးကို အောငမှှငအှောငဆှောငရှှကနှိုငတှဲ့ စှမှးရညှ ရှိကှောငှးကို ပှကှဖို့ အခှင့အှလမှး ပေးထားတာပါ။ ကှှနမှတို့လူတှလေုပကှိုငဆှောငရှှကနှတောကို ၊ လုပကှိုငဆှောငရှှကနှိုငတှဲ့ အစှမှးအစရှိတာကို ယုံကှညသှူ နညှးပါးနတယလှေေ။
Q: အခှခေံဥပဒကေို ပှောငှးလဲဖို့မလိုလားတဲ့သူတှေ ၊ တပနှဲ့ပတသှကပှှီး အမှဈတှယနှတေဲ့သူတှေ၊ ထောကလှှမှးရေးပတသှကပှှီးရှိနသေူတှေ အနနေဲ့ အဈမကှီးနဲ့အဈမကှီးပတဝှနှးကငှကှ လူတှကေို ပဈမှတထှားလာမှာကို မစိုးရိမဘှူး လားခငဗှှ?
A: ဒါ ကှှနမှ စိတထှဲထားတဲ့ ကိဈစမဟုတပှါဘူး၊ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ NLD စတငတှညထှောငခှှိနကှစပှီး လှနခှဲ့တဲ့ နှဈ ၃၀ လုံး အဲဒီလိုအမေးခံရပါတယှ။ လုပကှှံနိုငတှဲ့သူတှရေဲ့ လုပကှှံခံရမှာ ၊ အမှိုးစုံသော အနတှရာယပှေးခံရမှာ မစိုးရိမဘှူးလားလို့ မေးခံရပါတယှ၊ ဒီကိဈစတှကတေော့ နိဈစဓူဝ စဉှးစားနတေဲ့ကိဈစမဟုတပှါဘူး၊ ဒါအလုပနှဲ့ပါလာတဲ့ အစိတအှပိုငှးပဲပေါ့။